अपराधी लुकाउन हाम्रो चरित्र हत्या गरियो, हाम्रो जिन्दगी नै खराब भयो: बम दिदीबहिनी (हेर्नुहोस् भिडियोमा) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > अपराधी लुकाउन हाम्रो चरित्र हत्या गरियो, हाम्रो जिन्दगी नै खराब भयो: बम दिदीबहिनी (हेर्नुहोस् भिडियोमा)
अपराधी लुकाउन हाम्रो चरित्र हत्या गरियो, हाम्रो जिन्दगी नै खराब भयो: बम दिदीबहिनी (हेर्नुहोस् भिडियोमा)
admin November 17, 2018 भिडियो	0
काठमाडौँ । निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाई कारबाही गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरअघि अनिश्चितकालिन धर्ना सुरु गरिएको छ ।आइतबारदेखि सुरु भएको धर्नामा निर्मलाका परिवारसँगै अधिकारकर्मी र स्थानीयको सहभागिता छ ।
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको तीन महिना भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अपराधी पत्ता लगाउन नसकको भन्दै उनीहरु सरकारविरुद्ध धर्ना बसेका हुन् । मदनचोकबाट सुरु भएको ¥याली जिल्ला प्रशासन कार्यालयअघि पुगेर धर्नामा परिणत भएको थियो ।
र्यालीमा सहभागीहरुले घटनालाई नियोजित रुपमा सामसुम पार्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । धर्नामा सहभागी निर्मलाका परिवारले न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतनावनी दिएका छन् ।
¥यालीमा नागरिक संघर्ष समितिका पदाधीकारी, नागरिक समाजका अगुवा, महिला अधिकारकर्मी, विद्यार्थीहरु तथा स्थानीयहरु सहभागी थिए । सबैको एउटै माग छ की जसरी हुन्छ निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउनुप¥यो र कारवाही गर्नुप¥यो । यसअघि निर्मलाका बुवाआमाले सरकारले दोषी पत्ता लगाउन नसके आफुहरु आमरण अनशन बस्ने चेतावनी समेत दिइसकेका छन ।
अहिलेलाई अनिश्चितकालिन धर्ना दिने र त्यसपछि पनि सरकारले तत्परता नदेखाए परिवार नै आमरण अनसनमा बस्ने चेतावनी दिएका छन । श्रावण १० गतेको निर्मला पन्तको घटना पश्चात अशान्त बनेको कञ्चनपुर सदरमुकाम अझै शान्त हुन सकेको छैन ।
प्रहरीले निर्र्दोष व्यक्तिलाई अभियुक्तको रुपमा सार्बजनिक गरेपछि कञ्चनपुरमा दिनहुँजसो न्यायको माग गर्दै एउटा न एउटा कार्यक्रमहरु भईनै रहेका हुन्छन । तर सम्बन्धित निकायले नसुनेको हो वा सुनेर पनि नसुनेजस्तो गरेको हो ? कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरेको हत्यारा अझै पत्ता लागेको छैन ।
निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाएर कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन भयो, संसदमा आवाज उठ्यो, हत्यारा पत्ता लगाउन सात वटा छानबिन समिति बन्यो, सयौंसँग सोधपुछ भयो, केहीको डिएनए परीक्षण भयो, एसपी र इन्सपेक्टर बर्खास्त भए, केही प्रहरी निलम्बित भए । सय दिनको बीचमा थुप्रैथुप्रै घटना भयो, तर हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । जसकारण सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सरकारले नै हत्यारालाई संरक्षण गर्न खोजेको आरोप छ ।
निर्मलाको हत्या, हत्यापछि उठेको जनआवाज, बलात्कारी एवम् हत्यारालाई कारबाहीसँगै निर्मलाको न्याय लागि भएका आन्दोलन र हत्यारा पत्ता लगाउन भएका प्रयासको श्रृङ्खला यस्तो छ । १० गते निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भयो । साथीको घरमा पढ्नका लागि भन्दै गएकी निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको हो ।
साउन ११ः शव भेटियो
साथीको घरमा पढ्नका लागि गएकी छोरी अबेलासम्म घर नफर्किएपछि निर्मलाका बाआमाले खोजी गरे । प्रहरीमा उजुरी दिए । ११ गते घरभन्दा अलि परको उखुबारीमा निर्मलाको शव भेटियो । चोट लागेको र अर्धनग्न स्थितिमा शव फेला परेको थियो ।
साउन १४ः अनुसन्धानका लागि सिआईबीको टोली परिचालन
बलात्कारपछि हत्या भएको प्रमाणित भएपछि साउन १४ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ( सिआईबी)को टोली घटनाको अनुसन्धानका परिचालन भयो । टोलीले अनुसन्धान प्रयास गर्यो । घटनास्थल र शव भेटिएको ठाउँमा जान प्रतिबन्ध लगायो ।
भदौ ४ः दिलिपसिंह विष्ट सार्वजनिक
घटना भएको २५ दिनपछि अर्थात् भदौ ४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर र सिआईबीको टोलीले दोषी भन्दै स्थानीय दिलिपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गर्यो । मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका विष्टलाई प्रहरीले अभियुक्तका रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको थियो ।
भदौ ५ः आन्दोलन चर्कियो
मानसिक सन्तुलन गुमेका दिलिपसिंह विष्टलाई प्रहरीले जबरजस्त दोषी करार गर्न खोजेको भन्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिए । प्रहरीले वास्तविक दोषी उम्काउन विष्टलाई अभियुक्तका रुपमा सार्वजनिक गरेको भन्दै स्थानीयले गरेको आन्दोलनलाई मानवअधिकारवादीलगायतले साथ दिए । आन्दोलन उग्र बन्दै गयो ।
भदौ ६ः एसपी विष्ट र सिडियोको सरुवा
स्थानीयको आन्दोलन प्रहरीकेन्द्रित हुन थालेपछि कञ्चनपुरका तत्कालिन एसपी डिल्लीराज विष्ट, तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार खड्का र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तत्कालिन असई ज्ञानबहादुर सेठिको सरुवा भयो ।
भदौं ७ः छानबिन समिति गठन
घटनामा प्रहरीकै भूमिका शंकास्पद देखिएपछि भदौ ७ गते गृहमन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा ५ सदस्सीय छानबिन समित गठन भयो । अनुससन्धानका लागि टोली घटनास्थलमा खटियो । अनुसन्धानकै क्रममा समिति संयोजकले राजीनामा घोषणा गरे । पछि फेरि काममा फर्किए ।
भदौं ८ः शनी खुनाको मृत्यु
छानबिन समिति गठन भए पनि स्थानीयले आन्दोलन रोकेका थिएनन् । भदौ ८ गते झन् ठूलो प्रदर्शन भयो । स्थानीयको प्रदर्शनमाथि प्रहरीले गोली चलायो । प्रहरीले चलाएको गोली लागेर १६ वर्षीय शनी खुनाको मृत्यु भयो । दर्जनौं घाइते भए ।
भदौ ९ः एसपी विष्ट निलम्बित
भदौ ९ गते गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा कञ्चनपुरका तत्कालिन एसपी डिल्लीराज विष्ट निलम्बनमा परे । कञ्चनपरमा अर्का एसपी पठाइयो ।
भदौ २६ः दिलिपसिंह विष्ट रिहा
प्रहरीले सार्वजनिक गरेका विष्ट दोषी नभएको भन्दै जनमास उर्लिएपछि विष्टको डिएनए परीक्षण र उनको मानसिक अवस्था पत्ता लगाउन उनलाई काठमाडौ ल्याइएको थियो । तर उनको डिएनए नमिलेपछि भदौ २६ गते रिहा गरियो । र सोही दिन अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएका वम दिदिबहिनी पनि हिरासत मुक्त भए ।
त्यसपछि प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि झन् धेरै शंका उब्जियो । यसबीचमा प्रहरीले तत्कालिन एसपी विष्टका छोरा किरण विष्ट र भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टका भतिजा आयुष विष्टसँग सोधपुध भयो । उनीहरुको पनि डिएनए परीक्षण भयो । तर, उनीहरुको डिएनए मिलेन । यसपछि घटना झन् रहस्यमयी भयो ।
भदौ ३०ः पाँच प्रहरी निलम्बित
गृहमन्त्रालयले पठाएको छानबिन समितिको प्रारम्भिक प्रतिबेदनले अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले नै लापरबाही गरेको प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनका आधारमा पाँच प्रहरीः ज्ञानबहादुर सेठी, अंगुर जिसी, जगदिश भट्ट, एकेन्द्र खड्का र रामसिंह धामी निलम्बित भए ।
असोज ९ः छानबिन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन बुझायो
छानविन समितिले असोज ९ गते गृहमन्त्रीलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदन असोज २१ गते सार्वजनिक भयो । प्रतिवेदनमा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले नै लापरबाही गरेको उल्लेख छ ।
कात्तिक ८ः एसपी विष्ट बर्खास्त
अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको भन्दै तत्कालिन एसपी डिल्लीराज विष्ट र ईन्स्पेक्टर जगदिश भट्ट सेवाबाट बर्खास्त भए । प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दुबैजनालाई बर्खास्त गरेका हुन् ।
अहिले प्रहरीले थप चार जनाको डिएनए परीक्षण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले जसरी पनि हत्यारा पत्ता लगाएरै छाड्ने बताइरहेको छ । सरकार र प्रहरीको गरी योबीचमा सात वटा टोलीले घटनाको अनुसन्धान गर्यो । तर पनि घटना भएको सय दिनसम्म हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सडक आन्दोलन रोकिएको छैन । निर्मलाका बा, आमा न्यायको भिख मागिरहेका छन् ।
अत्यन्तै दुखद खबर : धन कमाउने अभिलाषा लिएर मलेसिया पुगेका धामी बाकसमा फर्किए ,छोरा छोरीको बिच्चली !
बिहे गर्दै टिका सानु , को हुन् श्रीमान ? हेर्नुहोस् भिडियो !
सुन्दै डरलाग्दो घटना झापामा, कुकुरले टो’क्दै गरेको ला’स फेला, घटनास्थल पुग्दा सबैको होस उड्यो (भिडियो सहित)
मेरो बुढीको गोप्य अंगको फोटो त्यो मान्छेको मोवाईलमा कसरी गयो? भेटियो थुप्रै प्रमाण (भिडियोमै हेर्नुस्)